Isizinda seTerpene yi-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic terpene kufakazelwe ukunikeza isivuno esiphezulu se-terpene caryophyllene oxide, isb kusuka kuma-cannabis nama-hops. I-Caryophyllene oxide iyi-terpene etholakala kuma-cannabis, hops, pepper, basil kanye ne-rosemary. Njengesakhi esisebenzayo, i-terpene caryophyllene oxide ekhishwe isetshenziswa njengesithasiselo sokunambitha nokunempilo.
Ukusetshenziswa kwe-Caryophyllene Oxide ekhishwe
I-Caryophyllene oxide ihlukaniswa iphunga layo elimnandi nokunambitheka (okusho amakhambi). Ngenxa yephunga lawo nokunambitheka okukhulu, ivame ukusetshenziswa njengesithasiselo sokunambitha ekudleni kanye nengxenye yamakha. Ngaphezu kwalokho, futhi inamandla okubopha ne-endocrine ye-CB2 receptors emzimbeni womuntu, okwenza kube yingxenye ethakazayo yemithi.
Isizinda se-Ultrasonic Terpene kusuka ku-Hops: Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwenziwa kusetshenziswa iHielscher UP100H ehlukanisa i-caryophyllene kanye nezinye izinto ze-terpenes kusuka ku-hop cones.
I-Ultrasonic Terpene Extraction ye-Hops ene-UP100H
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Caryophyllene Oxide
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-terpene caryophyllene oxide kuyindlela enhle yokukhiqiza okuphezulu, isb kusuka i-cannabis kanye nezintambo. Funda kabanzi mayelana ne-acoustic cavitation, isimiso esebenzayo se-ultrasonic isizinda!
Isibonelo, i-β-caryophyllene oxide yayivela i-ultrasonically ngedivayisi e-ultrasonic UP100H (100W, 30kHz) kusuka emahlathini omisiwe afihlekile.
Idatha yokuhlaziywa kwe-GC ikhombisa ukuvunwa kwesithamo se-β-caryophyllene oxide, ekhishwe yi-Hielscher's UP100H kusuka emahlathini.
UP400St – Iprosesa enamandla ye-400W enamandla e-terpene ekhishwa nge-agitator
Ukuhlaziywa kwe-gesi chromatografikhi kukhipha ama-ultrason hops: β-caryophyllene oxide, α-caryophyllene, α-pinene, mycrene, limonene, α-caryophylene, kanye ne-caryophyllene oxide nabanye.
Ngaphandle kwe-β-caryophyllene oxide, amanye amathepenethi afana ne-α-caryophyllene, i-a-pinene, i-mycrene, i-limonene, ne-α-caryophylene phakathi kwamanye athathwa ngempumelelo.
I-Protocol ye-Ultrasonic Terpene Extraction
Amathanga aphethwe yi-coffee grinder evamile ukuze athole ubukhulu bezinhlayiyana eziningana ze-hops isampula.
U-4.5mg we-hops wafakwa ebhodini, wabe eseza ama-5mL we-ethanol. I-vial ibekwe ku-beaker ngamanzi e-ice ukushisa ukushisa. Khona-ke, isampula yayikhulunywa nge-a UP100H, ifakwe i-sonotrode MS7, endaweni yokulinganisa ama-50% we-90sec.
Ukuhlaziywa kwegesi yokuchithwa kwegesi kwezingodo ze-ultrasonic kukhishwe:
I-Sonication iqinisekisa ukudluliswa okukhulu kwesisindo phakathi kwe-matrix yeseli kanye ne-solvent, ukuze ngenxa yalokho isivuno esikhulu kakhulu sokukhishwa kwekhwalithi ephakeme.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Extraction yeTerpenes
ukukhishwa kwekhwalithi ephezulu ye-terpene (akukho ukucekelwa phansi okushisayo)
ukusetshenziswa okuncane kwe-solvent
oluhlaza, olungemvelo olungemvelo okhipha i-terpene
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic terpene kugqamile njengendlela eluhlaza ekhishwa ngendlela, evumela ukusheshisa inqubo yokususa i-terpene ngenkathi kudinga amandla amancane kunezinye izindlela ezijwayelekile zokukhishwa (ie COcrcrential CO2, I-Soxhlet njll.). Ezinye izinzuzo ezixhumene nokusetshenziswa kokukhishwa kwe-terpenes kwe-ultrasonic kulula ukuphathwa kwe-extrator ye-ultrasonic, inqubo esheshayo, akukho imfucuza yamakhemikhali, isivuno esikhulu, i-eco-friendly, ikhwalithi ethuthukisiwe ngenxa yezimo zokucubungula emnene nokuvinjezelwa kokonakaliswa okushisayo.
Izithasiselo ze-Ultrasonic zeTerpenes
Ithebula elingezansi likunikeza inkomba yokuthi iyiphi idivayisi ye-ultrasonic engahle ilungele izidingo zakho zokukhipha i-terpene.
Sibuze Ngokukhishwa kwe-Ultrasonic kweTerpenes
I-high-power homogenizers ye-ultrasonic kusukela ebhodini kuya esikalini sezimboni.
Selvamuthukumaran, M .; Shi, J. (2017): Intuthuko yakamuva ekukhishwe kwe-antioxidants ezivela ezimbonini zokukhiqiza ezakhiwa yi-plant. Ikhwalithi yokudla nokuphepha, 2017, 1, 61-81.
Suslick, KS (1990): i-Sonochemistry. Isayensi 23 Mar 1990: Umq. 247, Issue 4949, iphe. 1439-1445
I-Caryophyllene noma (-) - β-caryophyllene, i-bicyclic sesquiterpene yemvelo engatholakala emafutheni amaningi abalulekile. Amakhambi alandelayo ayaziwa njengomthombo omuhle we-caryophyllene: i-cannabis, i-hemp (i-Cannabis sativa), i-black caraway (i-Carum nigrum), i-clove (i-Syzygium aromaticum), i-hops (i-Humulus lupulus), i-basil (i-Ocimum spp.), i-oregano (i-Origanum vulgare) umnyama omnyama (Piper nigrum), i-lavender (i-Lavandula angustifolia), i-rosemary (i-Rosmarinus officinali, ne-copaiba i-oli (i-Copaifera spp.) i-β-caryophyllene i-phytocannabinoid enobudlelwane obuqinile ne-cannabinoid receptor type 2 (CB 2), kodwa hhayi uhlobo lwe-cannabinoid receptor type 1 (CB 1) .
I-Caryophyllene oxide (futhi i-β-caryophyllene oxide) iyisisindo se-β-caryophyllene futhi i-crystalline emhlophe i-powder eqinile enezinga elibhakabhaka. 62 ° C.
Kubaluleke kakhulu ngenxa ye-anti-inflammatory, i-anesthetic yendawo, nemiphumela yokulwa ne-antioxidative. Ucwaningo lokuqala luveza ukuthi i-caryophyllene i-oksidi ingaba yisidakamizwa esingaba khona ekwelapheni komdlavuza. I-Caryophyllene oxide iyingxenye yendandatho ye-cyclobutane, esetshenzisiwe kakade kwezocwaningo lwezokwelapha ukuze kusetshenziswe i-chemotherapy carboplatin kakhulu.
I-Caryophyllene oxide, lapho i-olefin ye-caryophyllene isuke ibe yi-epoxide, iyisakhi esivunyelwe sokunambitheka kokudla.
Kokubili, i-β-caryophyllene ne-β-caryophyllene oxide ibonisa ukuthi amanzi ayenzi-solubility aphansi, okuvimbela ukumuncwa kwabo esitokisini. Ukusebenzisa lezi ze-squiterpenes njengezidakamizwa zokwelapha noma izithako zokudla okunomsoco, ukufakwa kwe-encapsulation ibe Liposomes ukunqoba ukungabi namandla okuncane kwamathambo ama-sesquiterpenes ngamanzi amaningi futhi kuqinisekiswe ukuthi i-bioavailability kanye ne-bioactivity. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic encapsulation yama-bioactive compounds!
I-Caryophyllene oxide ku-Cannabis
Esikhathini sesitshalo se-cannabis sativa, i-caryophyllene oxide itholakala njenge-sesquiterpene, equkethe amayunithi amathathu asoprene. I-Caryophyllene oxide ingenye ye-terpenes enkulu kunazo zonke futhi eningi kakhulu esitshalweni se-cannabis futhi inesibopho sephunga elihlukile nephunga le-cannabis. Isizinda se-ultrasonic sisebenzise ngempumelelo ukukhiqiza amafutha e-spectrum e-cannabidiol, ukuze umphumela wezinhlobonhlobo zezinhlanganisela eziningi zinikezwe.
I-Ultrasonic Cavitation Yokukhishwa
Lapho amagagasi amakhulu aphezulu anamandla aqala uketshezi, ukucindezela nokwandisa (ukungafani okungavamile) kuvela emanzini. Ngesikhathi i-rarefaction iphuma noma okuthiwa i-cavitation bubbles yenziwa eketsheni. Lezi zibhamu ze-cavitation, eziyi-bubbles ezincane zokuphumula, zenzeka lapho ingcindezi engapheli ikhona, ukuze amandla esimo sendawo esithwala amanzi ashintshwe. Ama-bubbles avumayo akhule ngaphezu kwamaningi amaningi okucindezela / okungafani nesimo se-rarefaction aze akwazi ukuthola amandla amaningi kanye ne-bubble cavitation ngaphansi kwe-sn inclosive collapse. Lesi simo siyaziwa njenge-cavitation. Ngokusho kocwaningo lukaProf. Suslick (1990), emabhulabheni e-cavitation anqoba izimo ezimbi kakhulu ngamazinga okushisa angafika ku-5000 K, izingcindezi zomkhathi we-1000, izinga lokushisa-ukupholisa ngenhla kuka-1010 K / s kanye namajetshi okuphuza ngamanzi angu-280m / s, kubonakala njengamandla aphezulu we-shear ne-turbulences endaweni ye-cavitation. Inhlanganisela yalezi zici (ukucindezela, ukushisa, ukukhipha isisindo kanye ne-turbulence) isetshenziselwa ukusheshisa ukudluliselwa kwamandla kwinqubo yokukhipha. Ngaphezu kwalokho, lezi zimo ezenzeka endaweni yakhona nazo zisetshenziselwa izinqubo ze-ultrasonic, ezifana ne-homogenization, i-emulsification noma i-dispersing.
Isizinda se-Ultrasonic seTerpenes
Isimiso sesitokisi se-ultrasonic sisekelwe emiphumeleni emibili, ekhishwa uma ama-waves aphakeme-amandla ama-ultrasound engamabhangqwana angena emanzini noma e-slurry:
Okokuqala, i-solvent (ehambisana nomoya ophakathi) ifakwe ematrix esitokisini. Kuncike ekutheni amandla namandla okucavitation, udonga lwamaseli luphazamiseka noma luphazanyiswa ukucindezela ketshezi.
Okwesibili, ngesikhathi umjikelezo we-rarefaction okuqukethwe kwe-cell (okungukuthi impahla ye-intracellular) kukhishwa esitokisini sangaphakathi. Ngemuva kwesizinda se-ultrasonic, amakhemikhali ahlosiwe angaphansi kwe-solvent futhi angahlukaniswa ne-solvent (isb. Ngokuphuma kwe-solvent) ukuze kutholakale ukukhishwa okuhlanzekile.
Ukwakhiwa kwezinto ezisetshenzisiwe (njengokuqukethwe komswakama, i-maceration / degree de milling kanye nosayizi wezinhlayiyana, kanye ne-solvent ekhethiwe yizici ezibaluleke kakhulu ukuze uthole inqubo ephumelelayo yokusebenza ye-ultrasonic. , ukucindezela, izinga lokushisa kanye nesikhathi sokunakekela ingane kufanele kuqinisekiswe futhi kulungiselelwe imiphumela emihle.